Fanandramana ara-tsaina tena izy: ny tantaran'ny Fanantena, ny rahavaviny kambana Finoana, ary ny fitiavana tsy maty mandrakizay - - Fahaizana Ara-Tsaina
Fanandramana ara-tsaina tena izy: ny tantaran'ny Fanantena, ny rahavaviny kambana Finoana, ary ny fitiavana tsy maty mandrakizay
Fahaizana ara-tsaina, hery ary famakiana
Voninahitra tsy manam-paharoa hatrany izany rehefa mametraka ny fitokisany amiko ho mpanjifa ara-tsaina ny mpanjifa. Ny famakiana sy ny mpanjifa rehetra (tonga nofo sy nofo) dia malalako ato am-poko. Saingy misy ny fotoana fanelanelanana sasantsasany izay mamela ahy hivoaka amin'ny fahagagana amin'ny tontolo metafizika iray manontolo - ary manetry tena. Nanetry tena tokoa. Ny tantaran'i Hope, ny rahavaviny kambana Faith, ary ny porofo nasehon'izy ireo tamiko ny tsy fahafatesan'ny fitiavana dia famakiana iray toy izany. Alohan'ny hanombohantsika dia tiako ny misaotra an'i Hope noho ny fahazoany mamela ahy hizara amin'izao tontolo izao ny tantarany mahatalanjona.
Hafatra ho an'ny fanantenana
Ny biraoko dia any Gainesville, Florida. Tanànan'ny oniversite io. Mandehana Gators! Ka, mahita tanora olon-dehibe taonina aho izay mbola tsy namaky famakiana ara-tsaina mihitsy. Tiako izy ireo! Tena faly foana izy ireo - ary mitaintaina. Manazava ny biraoko toy ny Halloween sy Krismasy mitambatra ny sahan'asan'izy ireo auric!
Amin'ity andro manokana ity, teo am-baravaran'ny birao no nijoro ny sprite kely malalaky ny zazavavy. Volom-bolo manjelatra mamirapiratra, maso lehibe tahaka ny volana, ary tsiky toy ny andriambavy Fairy. Namiratra be izy fa tsy toa tena izy. Ary, hadio ity - ny anarany dia Hope. Mahazo sarobidy kokoa noho izany ve ny zaza iray amin'ny oniversite?
I Hope sy izaho dia nanakalo ireo firavaka mahafinaritra sy whammo. Miditra! Nisy fanahy niseho tsara araka ny sitrakao. Tsy fanahy fotsiny io, fa matanjaka be ity iray ity ary mazava ho azy tena za-draharaha tamin'ny fitetezana teny am-pita.
'Manantena, ry malala', hoy aho nanontany moramora. 'Namoy ny iray tam-po taminao' ve ianao?
Ankehitriny, ireo izay efa nanao famakiam-pahaizana momba ny saina (na famakiana tarot) dia mahalala fa mangataka amin'ny mpanjifa aho mba tsy hizara fampahalalana hafa ankoatry ny famaliana eny na tsia. Amin'izany fomba izany dia afaka mahazo antoka isika fa mahazo famakiana haitao ara-tsaina tokoa izy ireo - fa tsy torohevitra na fivoriana fampiofanana.
Saingy talohan'ny nahafahako nisakana azy dia nipoaka i Hope, 'Ny rahavaviko kambana dia maty talohan'ny nahaterahantsika ary toa tsy nisy ampahany tamin'ny ahy foana tsy hita'.
Eny, ny fanantenana mamy dia efa nampihomehy satria ity no famakiany voalohany. Manampy izany ny hafatra voalohany nataony dia ny fifandraisan'ny fanahy avy any andaniny ary tsy maintsy natolotro azy ny boaty Pisss Tissues. Toy ny mitranga matetika ao amin'ny biraoko dia nanomboka nitomany.
Azo antoka fa voalohany ho ahy io. Tao anatin'izay roapolo taona izay aho dia mpampita saina ara-tsaina matihanina, mbola tsy niteraka zaza vao teraka niresaka tamiko toy ny olon-dehibe. Matetika, ny zazakely izay tsy tonga nofo 'tamin'ity indray mitoraka ity' dia natolotry ny mpianakavy hafa na namana akaiky. Fa nandeha niaraka tamin'io aho satria mafy be ny fifandraisako amin'ilay zaza
Hafatra miavaka marobe no natolotry ny kambana an'i Hope. Ny iray amin'ireo tsara indrindra dia ny hoe tia biby i Hope ary tena te-ho veterinera. Nampahery azy mafy i Sis mba hanohy hianatra ka afaka manampy biby betsaka araka izay tratrany izy.
Tamin'ny faran'ny famakian'i Hope dia nanontany izy hoe ahoana no fiasan'ny karatra tarot. Novaliako hoe: 'Ity aho hasehoko anao.' ary nahatratra ny iray amin'ireo takelaka karatra oracle biby tiako indrindra - Ny Fiteny miafina momba ny biby nataon'i Chip Richards & Jimmy Manton.
Ampifanaraho, atsofohy, alefaso ary, avy eo, wheeeeee. Ny karatra iray dia miala amin'ny tokotanin-tsambo ary miakatra eo amin'ny latabatra eo anoloan'ny fanantenana. Nihomehy aho ary niteny hoe: 'Ie, heveriko fa tena te hiresaka aminao ny olona iray.'
Hope niantehitra nijery akaiky ny karatra ary avy eo nivadika fotsy toy ny ravina - OK, matoatoa. Miala tsiny. Mila nilaza fotsiny aho satria lasa fotsy be io zaza io fa tsy mangarahara.
Avy eo hoy izy: 'OMG. Ny anarako dia eo amin'ity karatra ity. Ary ny anaran'ny rahavaviko dia Finoana. '
Nihozongozona mafy aho ary nanidy azy. Nodinihiko izy mba hahazoana antoka fa salama tsara izy. Satria tany amin'ny toeran-kafa ny saiko feno dia nandany minitra iray vao azoko ny zavatra nolazainy. Farany, nilentika ny teniny. Ny anarany (Hope) sy ny anaran'ny rahavaviny kambana (Finoana) dia natao pirinty teo amin'ilay karatra izay ‘nivadika ho azy’ avy teo amin'ilay tokotanin-tsambo. (jereo ny sary etsy ambony)
Gaga aho. Nihetsi-po aho. Feno fankasitrahana aho tamin'ny anaran'ny Hope ary, raha nisafidy ny hilaza taminy momba ny famakiana izy, ny renin'izy ireo.
Vazivazy sy taitra izahay fa nifampijery fotsiny. Ie. Fantatro. Tokony ho matihanina kokoa aho fa olombelona ihany koa, ary izany dia traikefa ara-tsaina be loatra. Ny porofo tsy azo lavina momba ny fiainana aorian'ny fahafatesany - ny fitiavana aorian'ny fahafatesany dia tena lehibe sy tsara tarehy.
Vantany vao afaka niresaka izahay, dia namihina ary nanao veloma.
Tsy ny fotoana voalohany na telo arivo akory aza ny karatra havanana misy hafatra marina dia tonga nanidina ara-bakiteny avy tao amin'ny tarot na oracle deck izay nokasihiko. Saingy, miaraka amin'ny anarana? Anarana roa? Amin'ireo rahavavy kambana? Saina. Notsofina.
Ahoana no nitrangan'izany
Ny ankamaroan'ny traikefa an-tserasera dia azo hazavaina amin'ny alàlan'ny siansa - farafaharatsiny izay fantatsika momba ny siansa ankehitriny. Saingy mbola tsy vitako mihitsy ny nahita hoe ahoana ny kara-tarot sy ny oracle ‘marina’ toa miseho foana amin'ny fotoana marina ho an'ny tena olona.
Noho io traikefa tsy mampino io dia nanontaniako ny mpampianatra ahy mpanelanelana - ny mpanelanelana amin'ny sehatra malaza, Arthur Findlay College mpampianatra ary mpandala ny fanahy Mavis Pittilla .
Nanazava i Mavis fa ny hevitro dia ny fampiasana ny telefaona (fanahy) amin'ny telekinesis - toy ny rehefa mivezivezy eo am-baravarana amin'ilay sarimihetsika 'Ghost' ny denaria.
Miahiahy aho fa ny ankamaroan'ny olona dia nanana ‘synchronisite hafahafa’ toa izao. Mivavaka na miresaka amin'ny olon-tiana etsy andaniny isika ary ny hira 'kisendrasendra' 'ry zareo dia manomboka mitendry amin'ny radio na mandeha ny jiro na mandeha ny TV, sns.
Ny fanahy sasany dia tia sy malahelo antsika amin'ny lafiny izay ahatongavany ara-batana avy any ankoatry ny voaly. Na dia mety ho toa hadalana fotsiny aza izany, raha misy manana fanazavana tsara kokoa dia tiako ny maheno azy. Amin'izao fotoana izao dia matoky sy mino ny fanahy aho. Rariny ihany, fantatrao. Rehefa dinihina tokoa, dia mangataka azy ireo aho mba hatoky ahy sy hino ahy.
Fitahiana maro ho an'ireo zanako vavy, Fanantenaina sy Finoana. Ny hazavanao ao anaty dia manazava ity tontolo ity sy ny manaraka. Misaotra anao nizara tamim-pahasoavana ny tantaranao manokana. Mitondra dikany vaovao amin'ilay fitenenana ianao;
Zavatra telo no haharitra amin'ny finoana, fanantenana ary fitiavana mandrakizay ary ny lehibe indrindra amin'izany dia ny fitiavana.
Ity fidirana ity dia navoaka tao Fahaizana ara-tsaina, hery ary famakiana . Tsoratadidy ny permalink . Fanontaniana apetraka amin'ny saina Lisitry ny fahaiza-manao psychic farany sy ny karazan-kery ara-tsaina
planeta akaiky indrindra ny masoandro
scorpio lehilahy sy vehivavy capricorn mahery
aiza ny tany izao amin'ny fihodinany